Nuxurka Khudbad Xaasaasiya Oo Uu Jeediyey Raysal wasaare Abiy Axmed – somalilandtoday.com
Nuxurka Khudbad Xaasaasiya Oo Uu Jeediyey Raysal wasaare Abiy Axmed
Wargeys Helay Xoggo La Yaab Leh Oo Ku Saabsan Dhalinyaro Reer Somaliland Ah Oo Ka Mid Ahaa Ciidankii Ay Soomaaliya Tababarka Ugu Dirtay Erateriya Ee Nolol Iyo Geeri Loo Kala Saari La’yahay
Xoggo Tibaaxay In Guddoomiye Cirro Kulamo Hoose La Yeeshay Odayaasha Iyo Wax-garadka Bariga Burco Iyo Gobolka Sool
“Farmaajo Iftiin Ayuu U Soo Saaray Sooomaaliya…” Sheekh Caan Ka Ah Somaliland Si Weyn Ammaanay Farmaajo
Raysal Wasaare Hore Isku Casilay Oo Mar Kale La Magacaabay
Published on November 30, 2020
“Markaan xilka raysal wasaare qabtay waxaan noqday maxbuus qol ugu jira laamaha Sirdoonka dalka . Madaxtooyada dalka dhawr kii bilood ee uboraysay ee aan deegenaa xaalada aan ku sugnaa lama qiyaasi karo. Waxaan ahaa qof Amnigiisu sugnayn oo dhimasho diyaar ah. Tusaale waxaa la diiday dhawr qof oo ila socotay oo ilaaladayda gaarka ahayd in ay xafiiskayga ama qolka aan deganahay Amnigiisa sugaan, Waxaa madaxtooyada gacanta ku hayay laamaha Amniga oo ah kuwa isku wada xidhan aniguna qof cusub oo meesha soo galay oo kale ayaan noqday. Waxaan ka fikiray haday wax dhacaan meeshaan ka baxsan lahaa , sidaa awgeed maalin ayaan dhahay gibiga madaxtooyada aan soo dhex wareego oo aan soo wada arko , waxay idhaheen Maya waa halis ciidanka madaxtooyada ilaaliya in ay qaar ku khaatijiyaan ayaa dhici karta , Sirdoonka ninkii haystay wuxuu isawirayay in aan marwalba halis ku jiro meesha kaliya ee aan ku badnaadi karana tahay in aan qolka iyo xafiiska udheexeeyo.”
Mudo ayaan maxbuus noocaa ah ahaa ,Xataa xafiiska shaqada aan qabanayo maadaamay shaqaaluhu wada ahaayeen kuwa ay sirdoonku keensadeen wax sir ah ma jirin go,aanka aan qadanayo wuxuu ahaa wax suuqa yaala maadamay kooxihii TPLF gacanta ku hayeen sirdoonka madaxtooyada maamulayay . Xataa ubadkaygii ayaa ucabsaday oo aan qurbihii ku Celiyay markaan dareemay in uusan Amnigoodu sugnayn, anigu habeen walba dhimasho waan ku tala gali jiray.
Kadib raysal wasaare ku xigeenka ayaan tashanay waxaan isla qaadanY in aan xaaladan lagusii jirin karin oo isku shaandhayn loo baahanyahay dhanka laamaha Amniga si isbadal dalka looga hirgaliyo.
Sirdoonku markay maqleen in aan isbadal samaynayno, waxay madaxdii sirdoonku boobeen hantidii dalka waayo ayaga kaliya ayaa ogaa gudaha dalka iyo qalab ka yaalay xafiiska sirdoonka,
Wax walba way rarteen inta aan ognahay waxaa ka badan inta aanan ogayn.
Kadib waxaan usoo jeesanay dhanka ciidanka qaranka oo qaybihiisa kala duwan 80% tigreegu gacanta ku hayeen
Janaraalo, janaraal kuxigeeno ,koroneel, koroneel ku xigeeno,shiihale
Daraja kaste waxaa ku qornaa qof tigree ah ‘
Dhibka ugu weyni wuxuu ahaa sidii waxaaasoo dhan loo badali lahaa .
Safarkaygii iigu horeeyey waxaan go,aansaday in aan deegaanka soomaalida tago Lkn sirdoonku waxay idhaheen Waa lagu dili oo Alshabaab ayaa joogta ee ha tagin, Waxaan dhahay kuwa idalaya cadayn ma haysaan in ay halkaa joogaan, Haday jawaabtu Haa tahay Dee waa shaqadiiniiye soo qabta kuwaas , hadiise aad cadayn hayn, Shaqadayda ha iga horjoogsanina, Kadib sidii ayaa jigjiga ku tagay.
Sababta aan utagay waxay ahayd waxaan ogaa in la rabay in somalidu goostaan kadibna tigreegu goosto abaabulka koobaadna soomaalida laga dhigay kadibna dalkuba kala yaaco, Si aan ufashilino Ayaan jigjiga utagay shacabkana ulasoo kulmay.
Kadib markaan isbadalka iyo isku shaandhaynta bilawnay waxay iskugu tageen Maqale halkaas ayayna qorshe qas iyo rabshad joogta ah ka wadeeen , Waxay sameeyeen 113 dhibaato intaan xilka hayay Mar ay meel qarxiyaan, mar deegaanada shacbka isku diraan, mar qowmiyada afka isku galiyaan ,iyagoo lacag iyo kooxo udaacad ah adeegsana.
Bal ufiirso deegaanka axmaaradu wuxuu xad laleeyahay Oromada, waad aragteen Oromada iyo axmaarada meelaha xadka ah waa la isku diray. Dhanka axmaarada iyo banishaangul waa la isku dhuftay, dhanka axmaarada iyo canfarta waa la isku dhuftay canfartu waa la mid orormadu waa la mid, deegaan walba deegaanka uu xuduuda lalahaa waalagu dhuftay.
Deegaan walba qowmiyada wada degen waa la isku diray Lkn deegaanka tigreega cidna iskuma dhicin, meelaha xuduuda, gudihiisana qowmiyadaha degen isma layn Sababtuna waxa weeye kuwa wax isku dirayaba maadaamay ayaga ahaayeen deegaankoodu nabad buu ahaa. Indha adaygooda waxayba dhihi jireen anaga uunbaa nabad ah deegaanada kale way gubanayaan!!! Oo yaa dabka ka dhex shiday deegaanada kale oo aan ayaga ahayn ?”
Waxaa xigtay qarixii Addis Ababa iyo dilkii haajaalu oo ay aad uqorsheeyeen.
Tusaale gaaban deegaanka canfarta iyo soomaalidu way islaayeen dagaal soo noqnoqday Kadib madaxweynaha canfarta ayaa fikir yaab leh soo bandhigay…..”
Xigashow: Cabdisalaam sheekh Xassn
Midnimo Web TV
By Wariye January 25, 2021
Tan iyo markii ay soo ifbaxday wararka la isla dhex marayo ee ku saabsan Dhalliyaro Soomaali...
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo dhawaan ka soo laabtay...
(SLT-Kuwayt)-Amiirka dalka Kuwayt ayaa mar kale raysal wasaare u magacaabay Shiikh Sabaax Al-Khaalid Amiirka dalka Kuwayt...
Sweden Oo Xuduudkeeda Ka Xidhatay Norway
(SLT-Stockholm)-Dowlada Sweden ayaa ku dhawaaqday inay xidheyso xadka ay la wadaagto dalka Norwey. Sababta ayaa ah...
By WariyeJanuary 25, 2021
Diyaaradaha Dagaalka Ee Xambaara Madaxyada Nukliyeerka Ee Shiinaha Oo Galay Hawada Taiwan.
Copyright © 2020 Somaliland Today.